Ụdị nkwekọrịta ➤ hụrụ na Nzukọ Ụwa nke March
Mbido » Noticias » Akwụkwọ akụkọ » Ụdị nkwekọrịta ➤ hụrụ na Nzukọ Ụwa nke March
18 / 07 / 2019 08 / 06 / 2019 site Antonio Gancedo
Nzukọ Ọchịchị Ụwa nke Ụwa nke Abụọ Maka Udo na Nkwụsịghị
E mere ememme 20 nke Eprel nke 2019 site na iji aka ya mee ihe, na-eji usoro mmemme videoconferences ZOOM nyocha nke ụdị nhazi nke mba na nzukọ mbụ nke II World March maka Udo na Nguzoghi.
Ngụkọta nke mba 44 keere òkè na njikọ njikọ na / ma ọ bụ zigara akụkọ.
A na-atụle usoro nhazi ndị a na nzukọ a:
Ọnọdụ nke mba na nkenke na kalenda.
Ihe dị iche: Web, Telegram, RRSS, wdg.
Nzukọ ihe omume ọzọ na-esonụ.
Ndị so na nhazi na / ma ọ bụ na-eziga akụkọ banyere:
Europe: Spain, Germany, Ireland, Belgium, France, Switzerland, Slovenia, Bosnia H, Croatia, Serbia, Greece, Italy na Vatican.
Afrika: Morocco, Mauritania, Senegal, Gambia, Mali, Benin, Togo, Nigeria, DR Congo.
Asia, Oceania na Australia: Iraq, Japan, Nepal, India, Australia.
Total: Mba 44.
Ọ na-achọ ime ihe na mbụ na obodo 75 na obodo 193.
1.1.1 28 ma ọ bụ 29 nke September: EVA-Espacio Vecinal de Arganzuela
1.1.2 Ụlọ ọrụ maka ikuku nke Marches na Plaza Mayor ma ọ bụ Plaza España ma ọ bụ Cibeles
1.1.3 Site na 1 ruo October 20 (20 ụbọchị)
1.1.4 Ihe ndị ọzọ echekwara
1.2.1 2018. Ihe ngosi nke World March na As. Neighbors of Feáns, C. Civic Library of Monte Alto, Library of Castrillón, As. Forum Popolis
1.2.2 2019. Ihe ngosi nke World March na Os Mallos Civic Center
1.2.3 Ihe omume kalenda na-abịa n'ihu
2 Africa: obodo iri na asaa - obodo iri abụọ na anọ
2.2.1 October-2019: Ụzọ nke World March site na Canary Islands.
2.7 Benin na Togo
2.10 Mba ndị ọzọ n'Africa
2.10.1 E zigara ozi na mba ndị na-esonụ
3 America: mba 22 - obodo 85
3.1.1 A na-ezigara ọtụtụ ndị ọrụ afọ ofufo na obodo ahụ òkù na ụdị nhazi.
3.4.1 Anyị nwere ndị dị iche iche nọchitere anya
3.4.2 Nyochaa banyere nhazi nke ụzọ nke isi ọrụ
3.4.3 Omume iji mezuo mgbe ememe ntuli aka
3.8.1 Nkwupụta nke ọdịbendị mmasị nke March nke abụọ March site na gọọmentị
3.10.1 Barrancabermeja (E. Onye Nkwado na-elekọta Anthony na Melba)
3.10.2 Medellín (E. onye na-akwado Elex na Gloria)
3.10.3 Cali-Popayan-Pasto-Cartagena-Tunia-Cucuta-Bucaramanga-Ipiales-Armenia-Neiva (obodo 10)
3.10.4 ndị ọzọ
3.11.1 Guayaquil na-ekere òkè n'ime ụdị nhazi
3.11.2 Blanket na ihe ndị a
3.12.1 Ozi si Venezuela
3.14.1 Ihe na mba
3.14.2 Ndị na-akwado Ụlọ ọrụ
3.14.3 Ntọala nkwado
3.14.4 Isi Ọrụ
3.14.5 Ụzọ na-agbanwe agbanwe
3.14.6 Ihe ndị ọzọ
3.14.7 Mmegharị Ọhụụ na Nhazi nke Na-akwado ma Na-akwado
3.14.9 Mgbasa ozi na mgbasa ozi
3.14.10 Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet
3.14.11 Ihe ngosi nke emeghi ebere na udo na scales dị iche
3.14.12 Ịnabata onyinye maka Udo na Nnoghobia na-ezighị ezi na mba ahụ
3.14.13 Nye visibilia ka esemokwu na ahụmahụ nke mmasị maka mba ahụ
3.14.14 Echiche siri ike na isiokwu ndị a ga-agbakwunye na mba ahụ dị ka ihe ndị dị mkpa ha si dị
3.14.15 Inye ego na ego onwe onye
3.15.1 Kpọtụrụ ụlọ ọrụ
3.18.1 A ga-enwe ihe abụọ dị mkpa ná mba ahụ
4 Oceania-Australia-Eshia: mba asaa - obodo iri na asaa
4.6 Eke Koreas abụọ
4.9.1 Anyị na-eme atụmatụ ime ihe ndị a na Nepal
4.9.2 Ihe ndi isi ulo nke World Second World March na Nepal
4.9.3 Ndị isi ụlọ ahụ ga-aga obodo ọzọ ma ọ bụrụ na o kwere omume.
4.9.4 Ọ ga-adịrị mma ma ọ bụrụ na Sudhir na anụ ahụ na-ekere òkè na Team Team na Nepal
4.10.1 Arịrịọ anyị
4.10.3 A ghaghị ịkọwa nkọwa nke mmekota na ụdị nhazi.
5 Europe: mba 29 - obodo 57
5.8.1 Ụzọ East-West
5.8.3 Ụzọ ọzọ nwere ike ịgbanwere
5.8.4 Ndị isi ụlọ
5.8.5 Mediterranean, Oké Osimiri Udo
5.10 Mediterranean: Osimiri Udo.
5.11 Obodo Vatican
5.11.1 Mkparịta ụka ndị metụtara ụka megide agha na ndị na-abụghị ihe ike
5.11.2 Na njedebe nke August nke 2019, tinyere ndị ọzọ na ndị ọrụ ọha na eze
5.11.3 Anyị ezigara Secretary nke State akwukwọ akwụkwọ ozi iji kọwaa ụdị nke ịmekọ ihe
5.12 Mba ndị ọzọ na Europe
6 Ihe onwunwe iji kwado ụdị nke ijikọta ụwa na nsogbu ndị ọzọ
6.1.1 Ndepụta nke asụsụ
6.1.2 Anyị na-agwụcha ọrụ nke weebụ. Mgbe anyị mechara nke a, anyị ga-etinye aka n'ihe gbasara RRSS.
6.2 Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet
6.3 Nzukọ na-esote ọganihu ọzọ iji tụlee ụdị nhazi nke ụwa
El Nwepụ nke 2ª World March 23 ma ọ bụ 24 nke September ga-eme na Madrid.
Ụlọ nke Ụlọ Nzukọ Ọgbakọ nwere ike ịbụ nke Ụlọ Nzukọ Cibeles ma ọ bụ nke ụlọ Bakery. Oge 12 ruo 14 (2h).
Ntugharị nkwado maka njem nke igwe elekere igwe iji kwado 2ª World March na 28 na September.
(EBA) Ha na-ahapụ 28 / 9 gaa 11s site na Legazpi ma gafee mpaghara Arganzuela, dị ka ha mere n'afọ ndị ọzọ.
28 ma ọ bụ 29 nke September: EVA-Espacio Vecinal de Arganzuela
Musical / cultural / gastronomic day with groups from different regions of the world (e nwere ndị Africa na South America iche iche).
N'etiti 2 na 8 nke Ọktoba: Ụmụ amaala ụmụ akwụkwọ Spain. Mgbasa ozi ụwa na obodo ukwu ndị dị iche iche nke nhazi ụwa
2 maka October: Ikwenye ịga njem site n'ógbè dị n'etiti obodo, malite na 16: 00h:
Ụlọ ọrụ maka ikuku nke Marches na Plaza Mayor ma ọ bụ Plaza España ma ọ bụ Cibeles
18: 30 Ebe a na-eme njem na mpaghara. Anyi choro uzo maka ihe omume na egwu egwu.
19: 30 Ngosipụta nke Udo nke Udo na Ughaghi. Gburugburu oghere na square.
20: 00 Home-Video
20: 30 Ịkụ egwú nke ndị na-egwu egwú na egwu obere obere ihe. Enwere ike ịde aha maka egwu maka ọdịdị: Mkpụrụ na anụ, Muerdo, Leonor Watling, Rozalén, Ismael Serrano, Jorge Drexler, Langui, Macaco.
Site na 1 ruo October 20 (20 ụbọchị)
Ngosipụta iji gosi ọdịnaya ndị a:
Foto na vidiyo nke «World March».
Vidiyo na Foto nke «Akara ngosi mmadụ na ụlọ akwụkwọ Madrid».
Akụkụ nke "Ntụaka nke enweghị ime ihe ike" Gandhi, ML King, Silo…
Ihe ngosi nke Mujeres dos Rombos: "Ọnyá", "Na-ele anya n'ụzọ ọzọ".
Ihe ndị ọzọ echekwara
Ịgba Egwuregwu OCA
Nyocha nke 2ª World March
Ngalaba Ọzụzụ maka ụlọ akwụkwọ na-emechi nke 2ª World March
Ebe enwere ike ịwụnye ihe oyiyi ma ọ bụ ihe ncheta na-echeta ọpụpụ nke March II.
Anyị na-enye ohere ohere El Matadero. Ọ ga - aka mma karịa ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ, n'azụ ọnụ ụzọ nke Plaza de Legazpi.
Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume, na plaza nke Skating Rink Madrid Río.
2018. Ihe ngosi nke World March na As. Neighbors of Feáns, C. Civic Library of Monte Alto, Library of Castrillón, As. Forum Popolis
Ihe omuma mmadu nke Udo na ihe omume Ogugu maka Udo na ikike nke gbara ndu.
Nkesa broshuọ nke World na-enweghị agha na World March.
N'ilepụta ihe ederede "Tupac Amaru, ihe na-agbanwe agbanwe" na Bibli. Castrillón.
"Samba, aha ehichapụ" aha na As. Vecinal Agra.
Nkwupụta - colloquium na Ngwongwo Nuklia na Library nke Castrillón.
Ngosipụta nke Ụlọikpe Na-adịgide Adịgide nke Ndị Na-adịghị Eme Ihe Ike na mpaghara Agra. Site na Ricardo Lucero
2019. Ihe ngosi nke World March na Os Mallos Civic Center
Colegio Fernández Latorre (ụmụ akwụkwọ 600 na ndị agbata obi), Talk - colloquium “outpụ na ime ihe ike, mkpa onwe onye na mmekọrịta ọha na eze” nke Philippe Moal dere.
Ihe omumu banyere imeghi ihe ike n'ime ndi otu ndi Propolis.
Ihe omuma mmadu nke Udo na aguta nke nkwekorita nke ndi mmadu bu Plaza de María Peter (umu akwukwo 300).
Nkwado nke Plenary Municipal nke Motion iji kwado Nkwekọrịta na Ntuchi Ngwá Agha Nuclear.
Atumatu banyere onyonyo na-adịghị na nnọkọ òtù Propolis.
Nkwupụta nzuzo nke City Council nke A Coruña na-akwado 2ª World March maka Udo na Imeghị ihe ike ma kwusaa October 2 dịka ụbọchị nke na-anọghị na-arụ ọrụ na A Coruña.
Ihe ngosi nke World March na Sphera Academy.
Ihe omumu banyere imeghi ihe ike n'ime obi Agra.
Ihe omume kalenda na-abịa n'ihu
26 April 2019 Ngalaba Ụmụaka nke Ụmụaka maka Udo na Ngalaba Na-adịghị na Nri na Mgbasa ya na òkè 8 na ụmụ akwụkwọ 3.500 keere òkè.
Mee 9: Ihe ngosi nke ụwa March na Ventorrillo Neighborhood Association.
6 nke June: nzukọ nkpọkọta nke ndị obodo n'obodo Sagrada Familia Social Center.
21 gaa 23 nke June: Guzo na Camping maka Udo na Right to Refuge, na ulo akwukwo na-emeghi ihe ike.
September 5: Oku 2M na-akpọ oku na obodo nke Ciudad Vieja Civic Centre.
October 2: Ihe Omuma nke Udo nke di na Plaza de María Pita ma na-agbanye aka na mmalite na Madrid nke 2ª World March maka Udo na Nta
Ihe ngosi nke ihe omuma mmadu nke Udo na ebe omumu nke ndi obodo umu akwukwo Mais de 3.500 sitere na A Coruña bu onyinye mmadu iji choo udo na amosar na-eme ihe ike.
Ụkwụ Ụkwụ: Ihe ngosi na nkatọ.
Africa: obodo iri na asaa - obodo iri abụọ na anọ
N'oge njem Martine site n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Morocco na site na mmemme ndị a na-ahaziri Miloud na Azzedine.
Ejiri ọtụtụ ìgwè dị iche iche na-eme ka ndị na-eme nchọpụta dị iche iche dị iche iche dị iche iche nke usoro nhazi zuru ụwa ọnụ, bụ nke kwesịrị iduga na atụmatụ maka ihe omume (lee akụkọ ahụ edepụtara na ndepụta).
N'ime izu ole na ole ọ ga-abụ njem ọzọ na Morocco.
October-2019: Ụzọ nke World March site na Canary Islands.
N'iji ohere nke Ebe Ụwa nke Abụọ na-aga ebe a, anyị ga-akwalite ihe ga-abụ 1st Canary Forum of Education for Peace.
Ọ na-agụnye ịkụnye ọtụtụ ụlọ akwụkwọ mmuta na ịhụ na ha nọgidere.
Mmasị bụ na n'ọdịnihu, ọ ga-abụ ebe nzukọ maka ndị niile nwere mmasị ịkwalite iwepụ ụdị ụdị ihe ike nile site na agụmakwụkwọ.
Nzukọ 3 nzukọ na-emetụtala.
Ha na-echere ịme ihe omume.
Na Dakar, Keba DIOP akpọtụrụ ụlọ akwụkwọ atọ ma kpebie ịkpọkọta ha maka otu ụbọchị nke emeghị ihe ike nke ha na-etolite akara mmadụ.
A na-agbasa ozi ọma na ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ dị iche iche ebe a na-akwadebe ihe ngosi.
Ọ na-achọpụta na ọ ga-ekwe omume na egwu egwu na nnukwu ihe nnọchianya mmadụ nke udo.
Ndi ozo ndi ozo: Ndiaga DIALLO Association Direkti humani, Cheikh DIOP, Samba X Theatre sensibilisation, Papis BADJI.
Martine amalitela ịgbasa ngo ahụ nye ụmụ akwụkwọ na-eto eto.
Ha abuana na nkata. Na-echere ihe omume banyere ụdị nhazi. Mamut Jan
Benin na Togo
A mepụtara ọrụ maka mmalite nke March nke Abụọ.
Ọrụ a dị mkpa mere ka anyị nwee ọhụụ doro anya banyere ihe mgbaru ọsọ anyị setịpụụrụ onwe anyị:
Hazie asọmpi bọọlụ akpọrọ "PEACE FOR A BETTER FUTURE".
Nke a ga - eme ka ìgwè nke Benin na Togo nwee ike ịlụ ọgụ maka ọnwa abụọ maka njigide nke mba abụọ ahụ ma ghọtakwuo ụkpụrụ nke ime ihe ike.
Nweta ụlọ akwụkwọ zuru ezu na ịhazi egwuregwu. Anyị ga-eme atụmatụ ntinye iji dọta ọtụtụ ndị mmadụ.
Mee ka mgbasa ozi mara nke ọma ka ha wepụ oghere maka ịgbasa ihe ike na omume ndị a ghaghị ime iji zụlite udo n'ụwa.
Jiri nlezianya na-eme njem nleta a na ndị ọrụ a na-akpọ òkù na ịme ihe nnọchianya udo ga-adị n'etiti anyị.
Cheta na: Anyị ga-achọ nhazi ụwa niile nke World March nke abụọ iji kwado ọrụ anyị na-enyere anyị aka inweta:
Ihe ndekọ ederede nke anyị nwere ike igosi ma ọ dị mkpa ka anyị wee ghara iji mgbagwoju anya nke ọha na eze mee ka anyị nwee mgbagwoju anya, ebe ọ bụ na mba niile na-enwe nchegbu, ndị ọchịchị na-echekwa ihe ọ bụla.
Zipu ozi na steeti ọ bụla iji kọwaa ọrụ ahụ.
Chọta ngwá ọrụ ndị dị mkpa iji mee njem a.
Na ọṅụ dị ukwuu, anyị anabatala ọrụ a dị oke mma na anyị chọrọ ka anyị nwee ihe ịga nke ọma.
Anyị ga-achọ ka ndị nnọchiteanya ụwa bịa Benin na Togo.
Anyị na-echere nkwenye iji kwupụta kalenda nke omume dị iche iche kpebiri na nghazi ụwa a.
Nzube na-ekwu na enwererịrị na ndị enyi na ndị Africa National Youth na òtù ndị ọzọ na-akwadebe ihe omume na Abuja.
Ọ na-achọ ka ụdị akwụkwọ iwu na-ahụ maka ụdị nke nchịkọta ụwa iji mee ka ndị nwe obodo nwee ike ịkpọtụrụ.
O soro na nkata ma zipụ ihe ndị a gbasara Congo DRC:
Na Congo, enweghi ezi udo ma obu ezigbo agha. Nke a bụ ezigbo isi maka ndị chọrọ ịlụ agha.
Ọ bụkwa ezigbo ihe ndabere nye anyị bụ ndị chọrọ iwuli udo.
N'ihe banyere 2ª World March, ndị na-ekwe nkwa inye aka n'ụzọ anụ ahụ anaghị emezu nkwa ha.
Otú ọ dị, jide n'aka na a ga-eziga data (ihe odide + ndị e dere ede) na mgbe niile ọ dịkarịa ala obodo Lubumbashi.
Anyị nwere olileanya na obodo ndị ọzọ dị na Congo nwere ike isonyere anyị.
Mba ndị ọzọ n'Africa
E zigara ozi na mba ndị na-esonụ
Tunisia na Ghana
Mozambique: E zigara ha ozi. Remigio CHIALAUE ejikọrọ
Kenya: Ha esonyere nkata. E zigara ha ozi: Ben Oko
America: mba 22 - obodo 85
A ga-enwe nzukọ nke Team Network na Latin America nke World March n'ime usoro nke ụdị nkwekọrịta a na-atụ aro ebe a.
Onye Nkwado Team: Pablo Acevedo na Gabriel Vergara.
N'April nke 2018, anyị na-ekere òkè dị ka Ọnwa nke abụọ na March na ememe mmiri nke Alternatives.
N'ebe ahụ, anyị chịkọtara 40 nwere mmasị mmasị (40).
Anyị zigara ha ọtụtụ ozi ịntanetị site na ozi na otu onye rịọrọ ka ị nwetakwuo ihe ọmụma ma kwalite otu egwuregwu mmadụ na-akpọ CONSENSUS gbasara mkpebi nkwụsị.
Anyị zipụrụ akwụkwọ ịkpọ òkù gaa n'ebe ndị a na-eme ihe ngosi nke obodo ahụ na Ụlọọrụ Periscope nabatara isonye.
A na-ezigara ọtụtụ ndị ọrụ afọ ofufo na obodo ahụ òkù na ụdị nhazi.
Ha ezipụla ozi ịntanetị gaa n'ọtụtụ òtù nke ụmụ akwụkwọ na-aga n'ihu ka ha gwa ha ka ha gosi na mgbasaozi ha òkù ịhazi ihe omume maka njem njem.
Ha so na njem maka Ụbọchị Ụwa site na ozi na ndị na-abụghị ndị na-eme ihe ike bụ gburugburu ebe obibi: na-enweghị agha ọ dịghị ngwá agha na-emerụ emerụ.
Ha ekesawo ihe ngosi n'etiti ndi ozo.
A na-ahazi ntọhapụ mgbasa ozi iji rịọ ohere na ịkpọọ ka hazie ihe omume maka njem njem ahụ.
Na Satọdee, 27 / 4 ga-aga ọzọ ihe omume Primavera de los Alternativas iji chọpụta kọntaktị.
N.York, Los Angeles. A zitere ozi
Mkpagbu nye M. Luther King Washington. Hélène Park.
Nkwekọrịta nke S. General nke UN na N. York.
Ihe omume na "Nkwado nke United Nations".
Omume na ókèala US Ndị mmụọ ozi na-ekere òkè n'ọtụtụ nkata.
Mkpagbu na Treaty of Tlatelolco.
Obodo, Antigua, Kwadoro. Mixco,
EP Alberto Vásquez Nhazi.
Nyere na Guatemala nọ na ntuli aka n'ozuzu n'ọnwa June.
Ụfọdụ omume na-elekwasị anya na nkwadebe.
Enwere esemokwu n'etiti ụlọ ọrụ obodo, dịka Ụlọikpe Ntuli Aka Nchịkọta Nnukwu na Ụlọikpe Iwu na Alaka Iwu maka idebanye aha ndị na-aga ịbanye na ndị ọrụ ọgwụ ọjọọ.
Ihe a niile anaghị enyere gị aka ime ihe ngwa ngwa nke 2ª World March maka Udo na Ime Ihe Ike na Mba.
Mwepụta nke Òtù Ndị Nkwado maka March maka Udo na Nkwụsịghị.
Egbalitere njikọta n'etiti ndị mmadụ na òtù dị iche iche na ụdị nhazi iji wusie ìgwè nkwalite ahụ ike.
Anyị nwere ndị dị iche iche nọchitere anya
Njikọ òtù obodo, DiverArte, Nhazi ndị metụtara Nkwurịta Okwu Obodo.
Nakwa, Ndị Nkụzi Mmụta, nakwa na National University, Estudiantina nke Mahadum San Carlos nke Guatemala, Obodo dịka Municipality nke Mixco.
Nyochaa banyere nhazi nke ụzọ nke isi ọrụ
Gaa na Ngalaba Quetzaltenango (200 kilomita site na isi obodo ahụ) na-emegharị kọntaktị iji hụ na isi nke Team na mpaghara a.
Na obodo Chiquimula, a maliteghachiri kọntaktị iji meeghachi omume, weghachite ọzọ, dịka ọmụmaatụ nke Ncheta Ụwa nke March, wuru n'ọnụ ụzọ obodo.
Ohere ebe ndi otu isi ga - ekewa na Santa Rosa de Copan Honduras na La Paz, na El Salvador.
Omume iji mezuo mgbe ememe ntuli aka
Ihe omume na ụlọ akwụkwọ mmuta, Ihe Atụ nke Udo.
Nzukọ, nyocha na mkparịta ụka.
Mpaghara Regional nke DiverArte haziri.
Nchịkọta na nyochaa akwụkwọ.
Ịmata usoro iwu nke Executive nke Guatemala gosipụtara iji kwado Usoro Nkwekọrịta Ngwá Agha Nuklia.
Nlekọta ụlọ akwụkwọ 60 ga-eduzi iwu nke akara udo, na ụmụaka site na ụlọ akwụkwọ dị na ókèala Honduras na Guatemala, mgbe ha natara 2ª World March.
Mkpakọrịta nke ụmụ akwụkwọ ahụike nke mahadum mahadum UNAH na mahadum abụọ dị iche iche na-ahazi nkwado nke 2ª World March, na njem ya na Central America.
Ndị ọchịchị nke Omoa na San Pedro Sula, kpebie isonye na 2ª World March, na nchịkọta ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ.
Na-eduzi okwu ihu ọha atọ na San Pedro Sula mahadum na isiokwu metụtara udo ụwa.
Leon, Managua. Ha na-enweta ozi.
San José, San Pedro de Montes de Oca, Liberia na Heredia.
Ndị na-ahazi na-arụ ọrụ na Team Promoter Team: Ngbanwe na Violent Times Foundation, Enyi maka Peace Center.
A na-agbakwụnyekwara ha, Mgbochi Mgbochi Ime Ihe Ike nke Ọchịchị Ndị uweojii na-ahụ maka ndị uweojii na PAIN-V na Ụlọ Akwụkwọ 11 na Ụlọ akwụkwọ (dị ugbu a).
Ulo oru maka ndi nkuzi na umu akwukwo.
Ihe omuma na akara mmadu na International Day of Peace 21 / 9.
Ememe nke 2 / 10 ụbọchị nke emeghị ihe ike na ọpụpụ nke World March nke abụọ.
Nkwupụta nke ọdịbendị mmasị nke March nke abụọ March site na gọọmentị
Ihe ndị a na-eme Mgbe a na-akpọ World March nke Abụọ.
International Forum on "Ọrụ nke Armies na XNUMXst Century". (Nkwenye gọọmentị na-echere).
Ihe na ụmụ 1000 na esplanade nke Ụmụaka Ụmụaka. (Na ime atụmatụ).
Egwuregwu maka Udo na Parque de la Democracia. (Na ime atụmatụ).
Ihe omuma mmadu na umu akwukwo, na ebe omumu akwukwo di iche iche na ogige ntulite na obodo ufodu. (Na ime atụmatụ).
Itinye aka na mmemme dị iche iche ma pịa ajụjụ ọnụ, Radio na TV. (Na ime atụmatụ).
Nhazi nke EPP na nzukọ kwa izu abụọ na Wednesday na CAP site na 5p.m.
Na Panama, World Without Wars and Without Violence account Belkis de Gracia na afọ gara aga nwere nzukọ na Interamerican University nke Panama.
N'agbata afọ Septemba na mmalite nke October nke afọ a, anyị ga-enwe mgbakọ na mahadum (ebe, ụbọchị na oge iji kwenye).
A na-akpọ ndị na-ekwu okwu ka ha sonye na Forum: «Culture of Peace, Non-mecence, nkwanye ùgwù maka ụmụaka na ọdịdị maka Panama ka mma», n'ime usoro nke II World March maka Udo na enweghị ime ihe ike. Ị ga-enwe ike ikesa ozi gbasara ndabere na ozi ị chere na ọ dị mkpa gbasara ihe emerela maka mmadụ na ntinye aka ndị ọzọ gbasara ụdị nhazi.
Gaa n'ihu na-arụ ọrụ na ụlọ akwụkwọ 40 na-akwado anyị na South American March. Ulo oru nke ndi na-emeghi ihe ike, ihe osise, eserese nke na-ezo aka n'isiokwu, welite ọkọlọtọ, akụkọ na odide, akara nke udo na mpaghara na ije.
A ga-ahazi akara nke udo na Plaza de Bolívar na-akpọ ndị mmadụ 5000.
Ịnweta nnukwu egwu maka udo na enweghị ime ihe ike.
Barrancabermeja (E. Onye Nkwado na-elekọta Anthony na Melba)
Nzukọ na Unipaz (University) na SENA.
Nnukwu njem site n'obodo ahụ na-akpọkọta ndị mmadụ 2000.
A ga - ejikọta ndị mmadụ na ihe ndị ruuru mmadu nke ha na - arụ ọrụ na njem mbụ na nso ya na nnukwu ihe nnọchianya nke udo.
Kpọọ onye so n'Òtù Ndị Isi ahụ ka ị soro B / ca na ogbako na akara.
Ọ dị mkpa iji gosi ụbọchị.
Medellín (E. Onye nkwalite na-elekọta Elex na Gloria)
Okpukpe nke omenala: obodo niile na-agbada Medellín na agbata ụkwụ na-agafe obodo ahụ.
Mkparịta ụka na mahadum banyere udo na enweghị ime ihe ike.
Gaa na kọntaktị na ndị gọọmenti, ndị na-ahụ maka Human Rights na ndị metụtara ya.
Cali-Popayan-Pasto-Cartagena-Tunia-Cucuta-Bucaramanga-Ipiales-Armenia-Neiva (obodo 10)
N'ime ha, a ga-eme njem na akara nke udo na obodo ọ bụla.
Kpọtụrụ ụlọ akwụkwọ
Mkparịta ụka banyere ndị na-abụghị ihe ike na mahadum na institutes.
Na Barrancabermeja, a na-ahazi ya ka otu ma ọ bụ mmadụ abụọ nke EB soro ha na-arụ ọrụ nke obodo na Kolibri Park.
Andrés Salazar na Marly Arévalo chọrọ ịwa onwe ha dịka akụkụ nke EB nke si na Madrid-Spain.
Anyị ga-eme T-shirts, ọkọlọtọ, ọkọlọtọ, akwụkwọ ozi na ụlọ ọrụ, mahadum na kọleji na ihe dị mkpa iji gbasaa World March nke Abụọ.
Enwere mmekorita ya na ndi otu gọọmentị, Human Rights, ntọala na ụlọ ọrụ ndị kwekọrọ n'otu mkpali nke udo na arụsi ọrụ ike.
Banyere ohere nke ịnweta isi nke World March, e nwere obodo 2.
Guayaquil na-ekere òkè n'ime ụdị nhazi
Mahadum: U. de Guayaquil na U. Casa Grande.
Egwuregwu nke klọb egwuregwu ndị ntorobịa.
Ụfọdụ Ụlọ Akwụkwọ na Obodo Guayaquil.
Blanket na ihe ndị a
Na-emekọrịta ihe na Pan American American Roundtable.
Uta nke Manta.
Ecuador-Manta: Ịmata maka obodo Manta-Ecuador maka mmechi nke isi agha.
Ozi si Venezuela
N'ebe a na Venezuela, nkwukọrịta, ma site na ekwentị na n'ịntanetị, n'ozuzu, sitere na ndị omempụ nke mgbanyụ ọkụ, nke a na-ejighị n'aka.
«Dịka ọmụmaatụ", na-ekwu okwu anyị interlocutor,"Enwere m izu abụọ na enweghị nkwurịta okwu cell, ma ọ bụ WhatsApp. Na ọtụtụ mmadụ".
N'ọnọdụ ọ bụla, anyị na-echere, ọ bụ ezie na anyị emeghị nke ọma. Enwere otutu mkpọtụ na nsogbu mba na mba ụwa.
Paramaribo Ha na-enweta ozi.
Recife, Minas, São Paulo, Cubatão na Caucaia.
Onye nkwado: Gunther A., ​​Marcos R., Jobana M., Régis M., Rosana B. na Vinícius P., Rosana B. na Fernando P.
Ihe na mba
Anyị na-enyocha na njem mbụ ahụ nwere mmetụta dị ukwuu na mgbasa ozi, nnukwu mkpesa na Bahia na Pernambuco.
Enwere ike ịkpọtụrụ mmadụ karịa 3 puku mmadụ weebụ na netwọk mmekọrịta nke oge ahụ.
A na-emegharị ọtụtụ n'ime kọntaktị ndị a ebe ọ bụ na njem South America na 2018.
Maka njem nke abụọ a, anyị ga-ahazi ọrụ ahụ na ihe nnọchianya nke udo na ụlọ akwụkwọ na ihe omume na forums maka enweghị nkwenye.
Ruo ugbu a, anyị nwere Ngalaba Nkwado nke 2ª World March na obodo 5.
E gosipụtara ihe ndị a na Recife, Minas, São Paulo, Cubatão na Caucaia.
Ha ekwenyebeghị na Rio.
Enwere ike ikwu na Curitiba na Rio Grande do Sul nwere ọrụ.
Anyị na-akwado na nkwa nke oghere nke Cultural Center nke São Paulo, nke UMAPAZ (Universidade Livre eme Meio Ambiente e da Paz) na Education odeakwụkwọ nke Cotia na Pernambuco maka eme egwuregwu nakwa n'ụlọ akwụkwọ.
A na-akpọtụrụ ụlọ ọrụ dị iche iche, dịka: Ụlọ Akwụkwọ, Ụlọ Akwụkwọ na Ndị Nkụzi nke Education.
Obodo ọ bụla ga-enwe ọrụ dị iche iche.
A ghaghị ịkọwa nkọwa ya n'obodo ọ bụla.
Na San Paulo ekwu banyere-eme ihe omume na Cultural Center na Cubatão a Symbol of Peace na 300 alumnos.La Central ụzọ ga Recife atụmatụ na 03 07 ụbọchị nke December, Sao Paulo 8 11 na / Dec., Paraisópolis / 12 14 na Minas ụbọchị / Dec., 15 ka 18 Caucaia / dic.Este bụ mgbalị mbụ oge kwesịrị ka a gbanwee, nwere ike ịgbanwe obodo, ebe, ụbọchị na oge.
Ụzọ na-agbanwe agbanwe
Anyị na-eme atụmatụ ime njem mmụta nke na-ejedebe akara nke udo na ụlọ akwụkwọ, gyms ma ọ bụ obere egwuregwu stadium.
Site October 2 anyị ga-amam ọtụtụ ụdị nke nchikota ka a ọnụ ọgụgụ nke egwuregwu, na-elekọta mmadụ na òtù okpukpe tupu amalite na-eme ka ikpeazụ otu dabeere eme, na, n'ebe o kwere mee, na-agụnye a ezukọ ụzọ gasị.
Na São Paulo ndị ozi ụfọdụ nwere onyinyo nke ime ihe ngosi na ogbako na Umapaz.
Pressenza na 4V plan ime a usoro nke obere vidiyo na mmemme iji agbasakwa na-enwe kwa izu na-enwe ọganihu akụkọ nke Convergence nke n'Obodo marcha.La ezube ime ka omenala ihe na kwagara inyom, na music na / ma ọ bụ ike edidu ke March nke Inmigrantes.En Recife uloru na ọzụzụ ọmụmụ maka ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ga-eme ka ọha na eze rede.
Nkwado nkwado: Ruo ugbu a, ọ na-elekwasị anya na kọntaktị na agụmakwụkwọ ndị odeakwụkwọ, ụlọ ndị ọchịchị na mahadum.
Mmegharị Ọhụụ na Nhazi nke Na-akwado ma Na-akwado
Anyị na ndị otu na mmegharị na-akwado 1ª World March na Brazil, dị ka ụlọ ọrụ Pólis, Sou da Paz, Soka Gakkai, Unipaz na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ụfọdụ n'ime ha abanyelarị na mmemme nke South American March nke a rụrụ na 2018.
Anyị enwebeghị ohere ịbanye n'ime nsogbu ndị a, mana anyị nwere ụlọ siri ike na ngwa 4V vidiyo nke nwere ike ikpuchi ihe ndị ahụ, na nnyefe ndụ nke ụfọdụ n'ime ha.
Mgbasa ozi na mgbasa ozi
Anyị nwere ndepụta nke mgbasa ozi iji zipụ mbipụta, ndị 6 ma ọ bụ 7 mgbasa ozi mgbasa ozi, mana ọ ka dị mkpa iji mepụta ìgwè ndị editọ ka ha mee mbipụta ma zipụ ha na oge ụfọdụ.
Anyị ga-enwe akwụkwọ Pressenza na SP na nyocha 4V dịka nkwado na akwado maka edezi ihe na ụdị nhazi
Ọ dị mkpa iji megharịa netwọk maka 2ªMarcha Mundial Facebook, Twitter, Instagram, web, telegram, wdg.
Ihe ngosi nke emeghi ebere na udo na scales dị iche
Ruo ugbu a, e nwere obodo abụọ bu n'obi ime ya: Cubatão e Cotia.
Anyị na-akpọtụrụ ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ, anyị na-ezube ịkọwa ihe ọmụma na Portuguese.
Ịnabata onyinye maka Udo na Nnoghobia na-ezighị ezi na mba ahụ
Na mbụ, anyị na-agbanwe ihe onyinye Paulo Freire, Maria da Penha, Augusto Boal, Chico Mendes na Marielle Franco nyere.
Nye visibilia ka esemokwu na ahụmahụ nke mmasị maka mba ahụ
Ugbu a na Brazil na ha bụ ndị dị ike nke nke uwe ojii ime ihe ike na ọgwụ ọjọọ agha, ziri ezi aka na ogbenye obodo na ada ha ngagharị iwe, uka ịtụ mkpọrọ, decontrol nke na-ebu agha, okike ime ihe ike, na-eto eto m asị okwu, mkpọchi ma ọ bụ ikpe nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị oru na-emegide ndị ọchịchị na igbu ọchụ nke nwa bi na mpụta na ụmụ amaala na ubi.
Echiche siri ike na isiokwu ndị a ga-agbakwunye na mba ahụ dị ka ihe ndị dị mkpa ha si dị
Ịhụnanya Ga-eweghara Iwe.
Inye ego na ego onwe onye
Anyị enwebeghị ike ịkọwa ego maka March na Brazil, anyị ga-amalite ime ya ugbu a na May.
Anyị ekwuola banyere mkpọsa ìgwè mmadụ.
Okwu, omume ma ọ bụ esemokwu nke nwere ike ịdaba ma ọ bụ nwee mmetụta na mpaghara ma ọ bụ zuru ụwa ọnụ: mmekọrịta Brazil na Israel, ịzụta ngwá agha.
Na nnyefe nke isi agha nke Alcantara maka USA.
Tumbes, Piura, Lambayeque (ndị mmadụ si Chachapoyas na Yurimaguas), Trujillo, Huaraz, Lima (15 obodo).
Ndi Carlos Degregori, Luis Mora, Mariela Lerzundi na Riccardo Marinai guzobere Ugwu Nkwado nke Peru.
Ụzọ nke EB ga-abụ ụzọ nke obodo niile. Enwere ike ịwa ya n'ọtụtụ dị iche iche.
Kpọtụrụ ụlọ ọrụ
Municipalities (Magdalena, Surco, Miraflores), Ministry of Education Cañete (iche iche 300 ụlọ akwụkwọ), College of ọkà mmụta n'akparamàgwà nke Peru, na-akwalite nonviolent Cities, Universities (Ricardo Palma: Casa de la cultura Korihuasi, National US Geological Toribio Rodriguez de Mendoza, US Geological Cesar Vallejo) School of Tourism nke National University of Tumbes, Piura Task Group, Regional Government of Lambayeque, Regional Office of Education of Arequipa, Humanist Educators Network Group Culture Yurimaguas.
Ihe onwunwe: Na mmepe: okporo osisi, ọkọlọtọ, ọkọlọtọ, akwụkwọ ntanetị, akwụkwọ mmado, broshuọ, akwụkwọ mpịakọta, leaflets.
Cheta na: Anyị nwere ndị kwadoro n'obodo ọ bụla. Anyị na-atụ aro iche iche iji kwado ihe omume n'oge ọ bụla. Anyị nwere ebe etiti dị na Lima, nke ụlọ ọrụ Ricardo Palma nyere ya.
Ihe ndị a na-etinye na akwụkwọ na ikesa nke akwụkwọ ịkpọ òkù na ụlọ akwụkwọ sekọndrị na ụlọ akwụkwọ isi na Sopocachi mpaghara La Paz. Malite na July, a ga-enwe ọhaneze maka ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ si n'otu mpaghara ahụ.
Nkọwapụta nke mmemme ndị a rụrụ abụghị maka.
Ụlọ Nzukọ Ọmụmụ ihe Silo malitere site na mgbasa ozi nke ụwa March. ha ga - amalite ọrụ mmemme na July.
Ọ bụ na mbụ nke nzukọ, na-akwado na 8 mpaghara: Salta, na nso nso a na CABA (Autonomous City nke Bs.).
Ihe omume na Parque Lezama, Province nke Buenos Aires na CABA; ndị fọdụrụ bụ ọrụ kọntaktị na ịchọ maka nnweta.
A ga-enwe ihe abụọ dị mkpa ná mba ahụ
Ịmata nne na nne nne ochie nke Plaza de Mayo dịka ndị na-agbasi mgba ike.
Mkpagbu na Silo. Ma n'usoro nke nzukọ
Anyị enweelarị Adhesion nke Ministry nke Education na Córdoba na nkwupụta nke mmasị nke Ụlọ Nzukọ Alaeze ahụ.
A na-eme atụmatụ obere ọrụ maka nnyefe nke akwụkwọ nke South American March, na Milagros Sala na Jujuy.
Anyị kpọtụụrụ ndị embassies nke Cuba, Venezuela na Bolivia na Buenos Aires, ma soro soro ndị Venezuelan nọ na Cordoba mee ihe.
Na-izute-Ịghọta na nne na nne nne nke May na Argentina.
Tolọ na Mario R. Cobos - Silo maka onyinye ya na Non-eme ihe ike.
P. de Vacas: 2 / 1 / 2020 Celebration of 10º anniversary of the 1ª World March.
Ha na-amalite inwe nzukọ gbasara ụdị nhazi.
Ha nwere mmasị na etu esi etolite na ndị mmadụ ọhụrụ bụ ndị na-arụ ọrụ.
Ha na-eme atụmatụ ịgagharị mpaghara nile nke Chile iji kwado okwu a maka ịkwalite ìgwè dị iche iche.
Ha ga-akwado na mmepụta nke ihe niile dị iche iche na-ekpuchi ụdị nzukọ na omume.
Ebumnuche bụ ịmekota ndị mmadụ ka ha nwee ike inye ohere na World March na mbipụta ndị ọzọ.
Nakwa na Chile, iji kwalite nkwado maka TPAN (Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons) nke na-aga n'ihu na ndị omeiwu, na-agbasapụ ndị ọchịchị.
Ha ga-eme site na otu ndị ọkà mmụta sayensị na-emepe usoro mmemme.
Oceania-Australia-Eshia: mba asaa - obodo iri na asaa
Rịgharịa na kọntaktị nke 1ª World March.
Ịmata New Zealand dị ka mba na-enweghị ngwá agha nuklia.
Ememme Ememe 10º nke Ememme 1M World March.
Sydney: A na-arụ ọrụ na nhazi nzukọ gbasara WM na Sydney.
Na-eburu n'uche na ị ga-enwe ike ime ihe na osimiri n'ụsọ WM, dị ka nke IWM. Decler bụ ọrụ maka Team Promoter.
Anyị ga-ejikọta na kọntaktị nke 1ª World March
Ngwurugwu gara Japan ma mee ka ụfọdụ kọntaktị na mahadum.
Ha na-eme ka kọntaktị nke Mayors For Peace, ICAN na nke 1ª World March.
Na-emenye ndị ahụ e gburu na Hiroshima na Nagasaki dị na Japan nsogbu.
Anyị ga-ejikọta na kọntaktị nke 1ª World March.
Eke Koreas abụọ
Anyị ga-emeghachite na kọntaktị nke 1ª World March.
Ihe omume na ókè nke South na North Korea.
Ọ ga-akpọtụrụ gị. Ọ na-akpali mmasị na 2ª World March gafere China.
Ebumnuche ị ga-akpọ ndị na-eso 1ª World March
Tulsi Sigdel na Kabir Ranjit na-arụ ọrụ dị ka ndị nhazi. Tinyere 3 Nepali ọzọ ga-abụ na 2 nke October 2019.
Magaj Bd Panthi na Sharada Prashad Dhital chọrọ ime ka Madrid gaa Africa dị ka EB.
Ha na-eme atụmatụ 5 na 10 n'etiti Nepalis aga Madrid na njedebe nke World March 8 / 3 / 2020.
Na Nepal, anyị na-aga ịhazi Nzukọ National Humanist.
Anyị na-arụ ọrụ na usoro nke abụọ nke March March maka ụlọ akwụkwọ, mahadum na òtù dị iche iche.
Anyị na-ahụ nzaghachi dị mma nke dabere na ụdị nkwekọrịta a chọrọ.
Anyị na-eme atụmatụ ime ihe ndị a na Nepal
Ọmụmụ ihe ọmụmụ na Kathmandu, Banepa, Panauti, Biratnagar.
A ga-enwe mkparịta ụka n'etiti ụlọ akwụkwọ dị na Kathmandu na Kavre.
Nzukọ Humanist (n'etiti òtù 50 nke kpebiri na mmasị gị).
Kọwaa tupu ọnwa 1 bụ ọrụ ndị isi ọrụ na Nepal.
Nwelite nke oge abụọ nke ọnwa March na-eme na akwụkwọ akụkọ National News na-ebipụta ụbọchị ọ bụla 15.
Brochure na Banner nke Ụwa March na Nepali na Bekee.
Ihe ndi isi ulo nke World Second World March na Nepal
1bọchị XNUMX - Ndị Base Team erutere na Nepal. Mkparịta ụka na-ezighi ezi na izu ike.
2bọchị nke Abụọ - Maachị World na Panauti, elekere 9 ruo 00 nke ehihie, nri ehihie, site na nzukọ elekere 11:00 ruo nke 1 nke ụlọ nzukọ nke obodo Banepa. (Laghachi Kathmandu)
Ndị isi ụlọ ahụ ga-aga obodo ọzọ ma ọ bụrụ na o kwere omume.
Anyị na-atụ anya ịchọta njem na Brattagar na ohere ndị ọzọ na obodo dị ka Bhaktapur na Kirtipur.
3bọchị XNUMX - Marchbọchị Machị na Kathamandu City Hall ma ọ bụ National Stadium.
Ha na-atụ anya 500 ka ndị 700 si na ụlọ ọrụ (ụlọ akwụkwọ, mahadum na òtù).
4bọchị XNUMX - Nnọkọ Nkwukọta Obodo (ịnwere ike ịnọ na Lumbini site na onyinye ndị sitere na ndị mgbasa ozi mba).
Anyị ga-amụ ihe ga-ekwe omume ịme njem na ogige nke Sagarmatha (Everest).
na 5bọchị XNUMX - Gaa n'ihu njem gaa N. Delhi-India.
Ọ ga-adịrị mma ma ọ bụrụ na Sudhir na anụ ahụ na-ekere òkè na Team Team na Nepal
Sitekwa na Nepal, anyị ga-enwe mmasị ịbị ọnụ na isi Team na India.
Anyị dị njikere ịnye ebe obibi na nri na njem maka ndị isi nke Team Team.
Tulsi Sigdel / Kabir Ranjit ndị nhazi nke Nepal
Anyị malitere ọrụ ahụ site n'igosi udo na ụlọ akwụkwọ dị na Kannur na ọtụtụ narị ụmụ akwụkwọ, ndị nkụzi nke ụlọ akwụkwọ ahụ na-ekere òkè.
Okirikiri ahụ na-aga n'ihu na egwu "Anyị ga-emeri..." nke otu ụmụ akwụkwọ na-abụ.
Anyị na-atụgharị akwụkwọ ọrụ anyị n'asụsụ 'Malayalam'. Ejirila m mpempe akwụkwọ na agba dị iche iche.
Ihe ọzọ dị mkpa bụ Team Promoter na mpaghara Jannie. Ikere òkè dị mma ma na-adọrọ mmasị.
Ọ na-esonye na nzukọ nile nke ụwa na ụdị nhazi.
Ka asụsụ anyị "Malayalam" pụta na saịtị mba ụwa.
Na ihe ndi anyi na ihe omume anyi nwere ike ibudata na weebụsaịtị.
Na-arụ ọrụ anụ.
Anyị ga-akpọtụrụ ụlọ akwụkwọ na kọleji. Ndị mmekọ NSS 15,000 ga-esonye na 2WM (Nchịkọta ndị Gandhi na ndị si n'okpukpe).
A na-akpọtụrụ Mumbai na Ekta Parishad.
Ekta Parishad. Site na nchịkọta nke ụwa nke 2ª World March na-akpọtụrụ Ekta Parishad na ndị na-ahazi njem Jai Jagat.
Anyị nwere nkwekọrịta nke ụdị mmemme. Ha ga-akwado 2 World March na-aga site na India na anyị ga-akwado ha na Europe.
A ghaghị ịkọwa nkọwa nke mmekota na ụdị nhazi.
Omume na New Delhi na 30 / 1 / 2020: ncheta ọnwụ nke Gandhi.
Europe: mba 29 - obodo 57
Munich na Berlin.
Na February Sandro gara "Friedenkonferenz" na Munich iji kwusaa 2 World March na anyị na-ahazi ihe omume na-ewu ewu na Munich na May 23 iji gbalịa ịkwalite 2 World March ọzọ.
Echiche a bụ na Maachị ụwa nke abụọ dabara na "Friedenskonferenz", na February 14.
Ihe omume na Germany nwere ike ịbụ n'etiti 12 na 14 na February.
Ị nwere ike na-12 na Berlin, mgbe ahụ, nọgide na-Leipzig (?) Ma ọ bụ Frankfurt (?) Na 14 na Munich. Sandro, Monica na Harald bụ ndị si Munich na-akwaga.
Ha na-achọ onye ga-arụ ọrụ na Berlin.
Anyị chọrọ ịma ma enwere njikọ na WILPF ma ọ bụ ICAN na Germany.
Anyị bu n'obi ịmepụta ìgwè nke ụfọdụ ndị 20 ndị nọ na Germany nwere ike ikwu ma kwadebe ihe omume.
Tinye ndepụta nke 7 kọntaktị anakọtara n'oge Friedenskonferenz:
Ị ga-arụ ọrụ kọntaktị.
A na-eziga ozi na ụdị nhazi.
Gaa na Nzuko omeiwu Europe.
Na-emetụ ndị ahụ e gburu na Ypres n'ili.
Na Bordeaux, òtù ACDN (Citizen Action for Nuclear Disarmament) nwere mmasị ịkere òkè na ọrụ ahụ.
Mgbe Rafa keere òkè na nzukọ nke Jai Jagat Europe, na Lyon, enwere ezigbo ndị kọntaktị na MAN (Mouvement for Alternative Nonviolente).
Enwere, na Nice, kọntaktị na-aga n'ihu na ìgwè dị iche iche iji hazie nkwupụta.
Na Ivry sur Seine, na mpaghara Paris, mmekọrịta na-aga n'ihu na obodo.
Ihe oru nke ozi Silo "Nchịkọta ụda Gravis» si Toulouse, atụmatụ na-gụnyere na March, nakwa dị ka mkpokọta 1001 kere maka a ọṅụ mmụta na mkpakọrịta Femmes Internationales, Mur brisé (FIMB) na ya netwọk.
Geneva A na-eziga ozi na ụdị nhazi. E nwere ndị mmekọ na Jai ​​Jagat Switzerland.
Na Athens enwere nzukọ mbụ nke 2 World March na ndị 50.
Ha na-asụgharị broshuọ ahụ n'asụsụ Grik.
Obodo Trieste, Vicenza, Brescia, Alto Verbano - Varese, Milan, Turin, Genoa, Ventimiglia, Florence, Perugia-Assisi, Livorno, Rome, Cagliari, Avellino, Naples, Reggio Calabria, Palermo na-esonye.
Anyị ga-agbalị imechi obodo nke 1 World March na ụfọdụ ndị ọzọ.
Anyị na-amam kewaa abụọ n'akụkụ EB abịa Italy ka Trieste 26 / 2 / 2020 (Trieste bụ nuclear mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri dị nso na isi nke Aviano Air Force ngwá agha nuklia 40)
Amalite na Trieste - Vicenza (isi ndị agha US bụ Ederle na AFRICOM) - Brescia (nke dị nso Ghedi Air Force Base nwere ngwa agha iri abụọ) - Alto Verbano - Varese - Milan - Turin-Genoa (ụzọ ọpụpụ 20tali 3/3/2020 kwupụta Ventimiglia-Nizza)
Ọ na-amalite na Trieste - Florence - Perugia - Assisi - Livorno (ọdụ ụgbọ mmiri nuklia, dị nso n'isi ụlọ ọrụ ndị agha US Camp Darby) - Rome - Cagliari (nnukwu mgbọ ndị agha na Europe) - Avellino-Naples (ọdụ ụgbọ mmiri nuklia, Joint Force Command) site na NATO) - Reggio Calabria - Palermo (ọpụpụ 3/3/2020 n'ihu Barcelona).
Ụzọ ọzọ nwere ike ịgbanwere
Puglia - Brindisi (ọdụ ụgbọ mmiri nuklia) ruo Middle East (Lebanon) - Saịprọs (ụzọ ga-ekwe omume na Green Line) - A na-atụle ma ọ ga-aga Gris na Balkans ebe ọ ga-ezukọ na World Base Team na Rijeka (Croatia), Isi Obodo. Omenala European 2020 ma ọ bụ nwetaghachi Spain.
Anyị na-agbalị itinye aka site n'Ịtali ịchọta ndị na-eme maka Team Team iji kpuchie ụzọ ahụ a chọrọ ya n'ụzọ zuru ezu (ọ bụghị naanị).
Mediterranean, Oké Osimiri Udo
Na usoro nke March nke abụọ, anyị na-akwado mgbasa ozi "Mediterranean, Sea of ​​Peace".
Na njedebe nke October, ụgbọ mmiri ga-apụ na Genoa ma metụ Mma, Barcelona, ​​Tunis, Palermo, Reggio Calabria, Cagliari, Livorno na ihe omume ga-ahazi na Museum Museum nke obodo dị iche iche.
A na - enwe nzukọ na steeti nke Vatican na - ekwu okwu atọ dị n'akụkụ anyị:
Mediterranean: Osimiri Udo.
Njem maka Udo nke Western Mediterranean na-ejedebe na Genoa nke ga-agafe Civitavecchia iji weta na Vatican (ma ọ bụ ebe dị na Rom) ihe ngosi «Ifuru nke ịma mma nke oke osimiri», ihe ngosi foto na osisi nke oke osimiri Mediterenian.
Ihe ngosi gị ga-abụ ohere maka nzukota na-adabara na ụmụ mmadụ na ụba nke Mediterranean.
Ọ ga-abụ ihe omume site na njedebe nke October ruo mmalite nke November nke 2019.
A ga-enwe ekele maka otu ìgwè nke ndị si na Team Base nke na-agagharị n'ụwa ma ọ ga-ekwe omume ịghọta akara mmadụ maka udo na enweghị ime ihe ike site na ndị na-eto eto sitere na obodo dị iche iche.
Site na nnọchite nke ndị nnọchianya, nke obere obere ụkwụ ga-esonye. Ụbọchị a tụrụ anya: njedebe nke February / 2020.
Mkparịta ụka ndị metụtara ụka megide agha na ndị na-abụghị ihe ike
Ụwa nke Abụọ nke abụọ na njem ya ga-achọta ihe dị iche iche nke ụwa na nke okpukpe, nchịkọta ahụmahụ, ihe akaebe na ndị mmadụ nwere ike izute n'oge opupu ihe ubi nke 2020 na Vatican.
Ọ nwere ike ịnweta ohere ịmatakwu ọnụ ọgụgụ ndị a banyere ndị na-adịghị eme ihe ike ndị na-adịghị ege ibe ha ntị ma ọ bụ na-eleghara ndị na-emeghị ihe ike anya dị ka Jizọs.
Na njedebe nke August nke 2019, tinyere ndị ọzọ na ndị ọrụ ọha na eze
Ọ nwere ike ịmepụta oge ka Nna Nsọ (Pope Francis) nweta ya, onye ga-ezute na ndị nnọchiteanya ụwa (machibidoro) nke ọ nwere ike ịnye ozi iji gaa njem ahụ.
Anyị ezigara Secretary nke State akwukwọ akwụkwọ ozi iji kọwaa ụdị nke ịmekọ ihe
Nkwekọrịta na Pope.
Nzukọ Mba Nile na-abụghị ime ihe ike na okpukpe.
Madrid 6 / 3 Nhazi usoro.
Madrid 7 / 3 XNUMX na-egwu egwu nke World March nke Abụọ.
Na Madrid 8 / 3 na-esonye na ngosipụta nke 8 / 3 International Women's Day.
Ọ dị mkpa iji jikọọ ọzọ, ezitere ozi ma ọ bụ chọta kọntaktị na mba ndị na-esonụ:
Iji kpebisie ike Finland, Sweden, Denmark, Poland, Czech Republic, Romania, Austria, Luxembourg
Ihe onwunwe iji kwado ụdị nke ijikọta ụwa na nsogbu ndị ọzọ
Anyị emeworị na saịtị weebụ https://theworldmarch.org
Banyere asụsụ, anyị na-arịọ ka ịlele ọkwa nke nsụgharị nke a na-eme n'asụsụ dị iche iche.
Enwere ike na akwụkwọ ndị dị mkpa dị na weebụ nwere nsụgharị ọrụ ndị a ghaghị ime n'asụsụ ọ bụla.
Ndepụta nke asụsụ
Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Omenala), Korean, Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch.
Ọ gara n'ihu:
Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourg.
Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Ndị Igbo, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese).
Ndi Sameria, onye Gris na Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sudanese, Swahili, Swedish.
Anyị na-agwụcha ọrụ nke weebụ. Mgbe anyị mechara nke a, anyị ga-etinye aka n'ihe gbasara RRSS.
A ga-ahazi nkuzi maka ndị na-emekọ ihe n'ịkwalite ozi.
A haziri weebụ ka ngalaba wee nwee ike inye aka site na obodo, gụnyere obodo si otú ahụ na-eme ka ụdị nhazi dị na mpaghara dị iche iche.
Anyị nwere ìgwè iji kwado mgbakọ na ọdịnaya nke weebụ. Anyị na-akpọ ndị nwere mmasị nwere mmasị ịkekọrịta.
Anyị na-achọ ime ka ha rụọ ọrụ ma mee ka ha dịkwuo ike.
Anyị nwere ikikere Ịntanetị 4 site na World World March na Telegram iji gwa anyị.
Enwere naanị nsogbu dị mkpa na akụkọ ihe mere eme site na mmalite, a ga-ahụkwa ndị ọhụrụ na-esonye na ọwa ahụ.
Ha ga-enwe ọtụtụ ndị ọchịchị maka asụsụ.
Anyị na-akwado ịmepụta otu otu kọntinent maka ozi ngwa ngwa na nke ugbu a (wdg. Ha arụọla ọrụ na Europe na Machị South America).
A ga-edozi nduzi maka iji otu a mee ka ọ rụọ ọrụ ma chọpụta na ọ bụghị njupụta, nhazi onwe ya na iwu ndị dị mfe na ndị nchịkọta 1 ma ọ bụ 2 maka mba.
Anyị na-agbalị ịmepụta profaịlụ anyị nwere na World March na Facebook na otu ntinye maka nkwurịta okwu, iji mepụta mmekọrịta site na ebe nchekwa dị iche iche pụrụ iche nke na-enyere aka ịzụlite ụdị nkwekọrịta.
Nke a ga - eme ka a kpọọ ihe omume ndị a n'ebe ha na asụsụ ha.
Anyị ga-enwe ntanetị Instagram na Bekee iji nyefee ọgbọ ọhụrụ.
Ihe onwunwe: Anyị nwere broshuọ na Spanish ka esi aga ịsụgharị asụsụ ndị ọzọ.
Maka echiche anyị ga-eche na a ga-emepụta ọhụụ ọhụrụ na May / 2019.
Nzukọ na-esote ọganihu ọzọ iji tụlee ụdị nhazi nke ụwa
Anyị na-eme atụmatụ ijide nzukọ ụwa ọzọ na June.
Categories Akwụkwọ akụkọ Igodo bọtịnụ